Masiixii Baa Imaadday | Farriinta Kitaabka
Yehowah baa Ciise reer Naasared ku tilmaamay inuu ahaa Masiixii la sii ballanqaaday
YEHOWAH dadka muu caawin lahaa siday u gartaan kuu Masiixa la ballanqaaday yahay? Haa. Bal eeg wuxuu Ilaahay sameeyay afar boqol oo sano kaddib qoridda Qaybta Cibraaniga ah ee Kitaabka. Naag dhallinyar oo Maryan la dhaho baa magaalada Naasared oo ku taallay waqooyiga Galili ku noolayd. Booqasho yaab leh bay heshay. Waxaa u muuqday malaaʼig Jibriil la dhaho. Wuxuu u sheegay in ruuxa quduuska ah oo ah xoogga Ilaah wiil ku dhali doonto inkastoo ay bikrad ahayd. Jibriil wuxuu sheegay inuu wiilkan ahaan doono Boqorkii la sii ballanqaaday oo weligii maammulka lahaan doono. Wiilkan wuxuu ahaan doonaa wiilka Ilaah oo uurka Maryan buu Ilaahay ku wareejin doonaa noloshuu samada ku lahaa.
Maryan qalbi wanaagsan bay ku aqbashay mudnaantan gaarka ah. Maryan waxay u doonanayd nin Yuusuf la yiraahdo oo nijaar ahaa. Markuu Ilaahay Yuusuf malaaʼig ka dhaadhiciso sababta uurka Maryan u soo diray wuu guursaday. Laakiin maxaa ku dhacay sii sheegiddii inuu Ciise magaalada Beytlaxam ku dhalan doono? (Miikaah 5:2) Magaaladaas yar waxay u jirtay 140 kiilomitir!
Taliyihii Rooma baa amray in dadka la tiriyo. Waxaa dadka qasab ku ahaa inay isku soo qoran magaalada dhalashadoodii. Waxay u ekayd in Maryan iyo Yuusufba ay ka yimaaddeen Beytlaxam saas darteed Yuusuf naagtiisii uurka lahayd meeshaas ayuu u kaxeeyay. (Luukos 2:3) Maryan waxay ku umushay xerada xoolaha oo meeshay wax ku cunaan bay ilmaheedii jiifisay. Dabadeedna Ilaahay wuxuu soo diray malaaʼigo fara badan siday ugu sheegaan niman adhijir ah oo bannaanka jooga inuu ilmahan ahaa Masiixii la ballanqaaday.
Kaddibna qaar kale baa ku markhaatifuray inuu Ciise ahaa Masiixii la ballanqaaday. Nebigii Ishacyaah baa sii sheegay inuu kici doono nin diyaargareyn doono jidka hawsha muhimka ah ee Masiixa. (Ishacyaah 40:3) Ninkan wuxuu ahaa Yooxanaa Baabtiisaha. Markuu arkay Ciise wuxuu ku dhawaaqay: “Bal eega Wanka Ilaah ee dembiga dunida qaadaya.” Markiiba xertii Yooxanaa qaar ka mid ah Ciise bay raaceen oo mid wuxuu yiri: “Waannu helnay Masiixa.”—Yooxanaa 1:29, 36, 41.
Markuu Yooxaana Ciise baabtiisay Yehowah qudhiisa baa u maragfuray. Ilaahay ruuxiisa quduuska ah buu Ciise ku soo dejiyay oo Masiixii buu noqday. Wuxuu yiri: “Kanu waa Wiilkayga aan jeclahay, oo aan ku faraxsanahay.” (Matayos 3:16, 17) Masiixii la sii ballanqaaday wuu yimid.
Goormay waxan dhaceen? Sanadkii 29 C.D. isla markii ay dhammaadeen 483kii sanadood uu Daanyeel sii sheegay. Tan waxay ka mid tahay caddaynta weyn oo aan laga murmi karin inuu Ciise Masiixa yahay. Haddaba Ciise farriin sidee ah buu ku wacdiyi doonaa xilliguu dunida joogo?
—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay Matayos qaybaha 1 ilaa 3; Markos qaybta 1; Luukos qaybta 2; Yooxanaa qaybta 1.
Yehowah sidee buu malaaʼigaha u isticmaalay siduu dadka ugu tilmaamo inuu Ciise Masiixa yahay?
Ilaahay sidee buu Yooxanaa Baabtiisaha u isticmaalay siduu inoogu caddeeyo inuu Ciise Masiixa yahay?
Sidee buu Yehowah u tilmaamay inuu Ciise Masiixa yahay?
WIILKA ILAAH MAXAA LAGA WADAA?
Yehowah waa Ciise Aabbihiis. Haddaba Ilaahay Ciise u ma dhalin siday binuʼadmiga carruurtooda u dhalaan oo kale. Ciise noloshiisa uurka naag ku ma ay bilaaban. Yehowah baa Ciise nolol siiyay wuxuuba ahaa kii ugu horreeyay uu Yehowah abuuray. (Kolosay 1:15-17) Sida darteed waxaa loogu yeeri kara Aabbihii Ciise. Markuu Wiilkan samada ku abuuray kaddib Yehowah wuxuu Ciise ka dhigtay ‘hawlhoggamiyihiisa.’ Jiritaanka abuur walba buu sababay xitaa caalamka.—Maahmaahyadii 8:30.
Wadaag Wadaag Masiixii Baa Imaadday